“De Gea waa kan ugu fiican booskiisa ee adduunka” – Solskjær oo iska indho tiray Ter Stegen iyo Alisson Becker – Gool FM
“De Gea waa kan ugu fiican booskiisa ee adduunka” – Solskjær oo iska indho tiray Ter Stegen iyo Alisson Becker
(Manchester) 02 Mar 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa difaacay goolhaayihiisa reer Spain ee David de Gea, kaddib markii uu qalad cad ku hor sameeyay kulankii shalay ay naadiga Everton ku booqdeen garoonka Goodison Park, kaasoo sababay in Red Devils uu gool ka dhasho.
Kooxaha Everton iyo Manchester United ayaa dhibacaha ku qeybsaday garoonka Goodison Park, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 1-1 ah, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Ole Gunnar Solskjær ayaa u tixgeliyey David de Gea inuu yahay goolhayaha ugu fiican adduunka, isagoo iska indhatiray goolhaayayaasha ugu fiican adduunka sida Ter Stegen iyo Alisson Becker.
Wargeyska “The Star” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Ole Gunnar Solskjær waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“De Gea wuxuu muujiyey falcelin, marka loo fiiriyo qaabkii uu badbaadiyay fursadii uu guulka ku dhalin lahaa Gylfi Sigurdsson inta ciyaarta ay socotay, ugu dambeyntii David waa goolhayaha ugu fiican adduunka”.
“David de Gea wuxuu soo maray xilli adag xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, laakiin aad ayuu ufiican yahay xilli ciyaareedkan. Waxaana ku kalsoonahay shabaq ilaalin David 100%.”
Klopp oo wareysi lama filaan ah uu bixiyay kaga yaabiyay taageerayaasha Liverpool kahor kulanka Chelsea